Sergio Ramos oo diiday qandaraaska cusub ee Real Madrid.
Home Horyaalka Spain Sergio Ramos oo diiday qandaraaska cusub ee Real Madrid.
Real Madrid Daafaceeda Sergio Ramos ayaa lagu soo waramayaa inuu diiday heshiis kooxda ee cusub isagoo ku fekerayaa bixitaanka Bernabeu.
Tababaraha kooxda Zinedine Zidane ayaa isha ku haya 34 jirkaan, oo ay wehliyaan Luka Modric iyo Lucas Vazquez , inay sii joogaan kooxda wixii ka dambeeya xagaaga 2021, iyadoo la fahamsan yahay inuu yahay ciyaaryahanka reer Croatia ciyaaryahanka kaliya ee ogolaaday heshiis cusub.
Marca ayaa warinaysa in wadahadaladii u dhaxeeyay wakiilada Ramos iyo Real Madrid la qabtay 1-dii Janaayo, iyadoo kooxda ay u soo bandhigtay daafaca hal sano oo qandaraas ah.
Heshiiska cusub ayaa ka dhigaya inuu kasbado wax ka badan 10 milyan oo ginni, laakiin Ramos ayaa diiday dalabkii uga yimid kooxda reer Spain maadaama uu jeclaan lahaa qandaraas dheeri ah.
Inkasta oo ay kooxdu si aad ah u doonaysay in ay sii haysato kabtankooda wixii ka dambeeya xagaaga dambe, Los Blancos ayaan doonayn in ay ku mashquusho siyaasaddooda ku aadan Xidigaha 30 sano ka hooseeya.
Haddaba in January uu suuqa kala iibsiga furan yahay, Ramos ayaa la gorgortami karin koox kale ee Yurub isagoo xur ah, iyadoo xiddiga reer Spain ay si dhow ula socto Manchester City iyo sidoo kale kooxda heysata horyaalka French Paris Saint-Germain .
Ramos ayaa in ka badan 650 kulan u saftay Real Madrid tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Sevilla sanadkii 2005, waxaana uu kula guuleystay shan horyaal oo La Liga ah iyo sidoo kale afar jeer oo uu ku guuleystay Champions League.
Previous articleJose Mourinho: ‘Inaan si dhab ah u qaato EFL Cup-ka waxay sir u tahay guushayda’
Next articleOzil oo wadahadalo kula jira kooxda DC United ee Mareykanka ka dhisan